» हेटौंडामा पसल संचालक आफैले सामान किन चोरी गरे ?
हेटौंडामा पसल संचालक आफैले सामान किन चोरी गरे ?
१७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १०:२७
हेटौंडा । हेटौंडा ४ पारीजातपथमा रहेको घिमिरे ईलेक्ट्रिक एण्ड ईलेक्ट्रोनिक सेन्टरमा पसलका संचालक आफैले आफ्ना पसलका सामान चोरि गरेको प्रहरीले दाबि गरेको छ । पसलका सामान त्यहाँ रहेको नगद रकम अरु कसैले चोरी नगरीकन पसल संचालक आफैले अनौठो तरिकाले चोरी गरेको भनेर आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले पत्रकार समेलन गरेर सार्बजनिक गरेको छ ।
पसलका संचालक उमेश घिमिरे आफैले पसलका सामान अन्यत्र कोठाभाडामा लिएर राखेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी उपरिक्षक मुकेश कुमार सिंहले बताउनुभयो । सामान चोरी भएको भनेर प्रहरीमा निबेदन दिएपछी खोजी गर्ने क्रममा यो तथ्य फेला पारेको हो । पसल संचालक घिमिरेले बैंकलोन तिर्ने भाका सारीदिन अनुरोध गर्ने र पसलको ईन्सोरेन्स दाबी गर्ने योजना अनुसार यो काम गरेको डीएसपी एज्ञप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो ।
संचालकले पसलबाट नगद सहित ३२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान हराएको दाबि गरेका थिए । बैकको ५० लाख ऋणका कारण बारम्बार ताकेता गरेको र ऋण तिर्नका लागि बैकबाट भाका पनि सार्ने र इन्सुरेन्सबाट पैसा पनि लिने उदेस्यले यो काम गरिएको उहाँले दाबि गर्नुभयो ।
निबेदकले दाबि गरेअनुसार वाईरिङको तार ३१ बोरा चोरी भएको र उक्त सामान ८ गते नै काठमाण्डौको पाटीबाट डेलीभरी लिएको भनिएकोमा उक्त सामान डेलीभरी नलिएको निजको स्टकमा नभएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसैगरी एलईडि बत्ती १२ कार्टुन, स्विच १४ कार्टुन, सिलिङ पंखा ४ कार्टुन, चोरी भएको भनि निबेदनमा उल्लेख भएकामा हेटौंडा ४ पारिजातपथमा देबेन्द्र सापकोटाको घरमा कोठा लिई निजले नै लुकाई राखेको अवस्थामा एलईडि बत्ती ११ कार्टुन, स्विच ९ कार्टुन, सिलिङ पंखा ४ कार्टुन, फेला परेको प्रहरीले पत्रकार समेलन मार्फत जानकारी गराएको छ । नगद भने काउण्टरमा नराखेको प्रहरीले जनाएको छ ।